Chickpeas na-esi ísì ụtọ na nduku na peas | Bezzia
Maria onyekwere | 19/06/2022 10:00 | Akwụkwọ nri
na chickpeas na-esi ísì ụtọ na poteto na peas na anyị na-atụ aro taa nwere ike ghara ịbụ ndị kasị adabara ịkọrọ okpomọkụ nke ikpeazụ izu ụka, ma ugbu a na ha na-azụ na nkịtị, ha dị ka a oké amaghị.
Ngwa nri ndị ahụ na-enye chickpeas ndị a bụ isi nke dị mfe ịkwadebe. Paprika, cumin na turmeric ha na-enye ọ bụghị naanị ụtọ mana agba mara mma na ihendori tomato nke ha na-eso. Tomato ihendori nke ị nwere ike ịkwadebe ya na tomato chara acha na tomato mkpọ ma ọ bụ ọbụna tomato a gwakọtara agwakọta.
Ọ bụrụ na ị nzọ na chickpeas esichaa Ọ gaghị ewe gị ihe karịrị nkeji iri atọ iji kwadebe nhazi a. Ndụmọdụ anyị bụ na ozugbo ị banyere, mee akụkụ abụọ, ka ị wee nweta nri ahụ maka ụbọchị abụọ ọzọ wee zuru ike na isi nri. sonyere ha maka a akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ salad ma ị ga-enwe nchịkọta nhọrọ zuru oke.
Tomato mkpọ peeled 3
1/4 nke yabasị ọcha
1 kloovu nke galiki
1 teaspoon ose
1 ngaji nke paprika
1/2 teaspoon ala cumin
2 poteto, diced
1 na-aga n'ihu
200 g. sie chickpeas
Tinye na iko mmiri tomato, yabasị, galik clove, mmanụ oliv na ngwa nri: ose, paprika, turmeric na cumin ntụ ntụ. Tinye nnu ma tie aka ruo mgbe ị nwetara ihendori.
Emechaa wunye ihendori n'ime ite na okpomọkụ.
Tinye nduku na agwakọta.
Mgbe ahụ wụsa mmiri ahụ esi nri poteto n'oge nkeji iri abụọ.
Mgbe ah tinye peas ma sie nri nkeji 5 ọzọ ma ọ bụ ruo mgbe poteto na peas agwụla.
Imecha tinye chickpeas esiri esi ma gwakọta ka esi nri dum nkeji ole na ole ọzọ.
Jiri nduku na-ekpo ọkụ na peas jee ozi chickpeas na-esi ísì ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Akwụkwọ nri » Chickpeas na-esi ísì ụtọ na poteto na peas